Yikuphi Are The Izitimela Esheshayo EYurophu Futhi Umhlaba | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Yikuphi Are The Izitimela Esheshayo EYurophu Futhi Umhlaba
(Kugcine ukubuyekezwa On: 27/09/2020)
Wake wafuna ukuvakashela eYurophu okuthile vintage, efana isitimela? ingabe kuzwakala ahambe kanjani 300 angu ngehora? IYurophu inenye futhi inethiwekhi enkulu ngesivinini izitimela oluzothatha ngokushesha endaweni oya kuyo. izitimela ngesivinini kuphela ayeke emizini eyinhloko. Izitimela ukunikela izinqola okunethezekile 1st futhi ekilasini 2nd, kanye omuhle catering Services. Nakhu kabanzi mayelana esheshayo izitimela eYurophu.
I Alfa Pendular yohambo nasogwini Portugal, kusukela Braga ukuze Faro eyeka Porto, Coimbra, futhi Lisbon. Esikhathini esingaphansi 6 amahora, ungakwazi ukufinyelela kolunye uhlangothi yezwe futhi ujabulele izindawo kakhulu ebhodini.
Alvia Uqeqesha eYurophu
I Alvia, Ingabe Spanish Izitimela Esheshayo eYurophu Olwa, bahambe amabanga amade ngesivinini afika ku 250 angu ngehora. Ngaphezu yokuxhuma amadolobhakazi amakhulu of Spain, lokhu isitimela inikeza Izinsiza yesimanje. Yilezo ababehlezi izihlalo enkulu njengoba kungabantu abangaphezulu kuka isikhala esanele imilenze, ithebula ukusonga, futhi alalelwayo video Imiphumela.
ICE izitimela eYurophu ukuxhuma yonke emadolobheni amakhulu e-Germany emadolobheni amaningi emazweni angomakhelwane. Lokhu high-speed isitimela yesimanje namasevisi ngehora inikeza okuningi: phakathi kwezinye izinto, izinqola ne air conditioning, isikhala esikhulu yokwelula imilenze, isiqophi izikrini izinhlelo alalelwayo. I-ICE izokusa noma yikuphi eJalimane futhi kuyindlela enhle yokuhambela amanye amazwe, njenge Austria, France, futhi Switzerland.
Imicibisholo izitimela (ebibizwa Eurostar Italia) akha inethiwekhi yesimanje ngesivinini zinjalo Olwa kwama-Italian ku Izitimela Esheshayo eYurophu. Ikhambo Imicibisholo ukujabulela uxhumano okusheshayo inhliziyo emadolobheni amaningi Italian ezifana eRoma, Venice, Florence, Milan, Verona, futhi Naples. Kukhona izinhlobo ezintathu Le Frecce izitimela ukuthi ngithi kini esheshayo uxhumano kungenzeka ukuba ningabi nje kuphela emadolobheni ethandwa kakhulu e-Italy kodwa emadolobheni amancane yasemaphandleni Italy.
Eurostar ingaphansi winner ulwandle Izitimela Esheshayo eYurophu
I Eurostar ngesivinini isitimela ukhetho kangcono ngahambela London Brussels noma Paris. Lokhu isitimela kuzokusa ngokusebenzisa Umhubhe Channel ukuze inhliziyo London. Izikhangibavakashi kwamanzi bejabulela konke ukunethezeka kwase-high-speed isitimela yesimanje.
Lezi izitimela ngesivinini ukusebenzisa phakathi Austria, Czech Republic, Germany, Hungary, naseSwitzerland. Railjet izitimela kukhona state-of-the-art onobuhle ezinikeza twist kumuzwa travel ngokunikeza service ngesivinini ne induduzo enkulu. Umxhwele izindawo ugibelile namasevisi kakhulu ezinye izici. Ngesivinini afika ku 230 amakhilomitha ngehora usufinyelelwe. I Railjet ikuvumela ukuhamba kulo Austria futhi emazweni angomakhelwane ezifana Germany, Switzerland, futhi Hungary.
TGV – Ingabe Pick lwethu Izitimela Esheshayo EYurophu
Ukusebenza wonke France nangale, TGV ophethe irekhodi ijubane emhlabeni ngoba izitimela ezivamile. On 3 April 2007, Isitimela se-TGV POS sifinyelelwe 357.2 mph (574.8 km / h), okwenza kube isitimela yesihlanu esheshayo eYurophu. TGV trainset ifinyelele ngisho 515.3 km / h (320 mph) ngaphansi kwezimo ukuhlolwa okukhethekile futhi akakaze yaphazanyiswa izimo zezulu ezifana inkungu ekhasa noma ezinye.
Izincwajana zemininingwane e Grande Vitesse kuzokusa kwi uhambo romantic isitimela eParis noma kuphi ogwini Mediterranean uma ngakho, Ngiyacela. Thenga ithikithi TGV futhi ukubamba i-movie e edumile emhlabeni wonke Cannes futhi ujabulele izivini ezinhle we Loire Valley, kamuva. Engeza adventure okuthé xaxa ukuze ride wakho by imizi ngokuvakashela ezifana Marseille, Lyon, futhi Bordeaux.
Montpellier ukuze Marseille Izitimela
Nice Marseille Izitimela
Paris Marseille Izitimela
Lyon ukuba Marseille Izitimela
I SJ Swedish ngesivinini ingenye izitimela ezinejubane kakhulu Europe elakhelwe sezwe zaseScandinavia futhi run ngesivinini kuze kufinyelele 200 angu ngehora. Lezi izitimela ukunikela ezingeni eliphezulu wenduduzo zikuvumela ukuhamba ngokushesha enkabeni emadolobheni amaningi Swedish ezifana Stockholm, Gothenburg, futhi Malmö. Lezi izitimela ngesivinini futhi ukuhamba ngqo Copenhagen (Denmark) nge emgwaqweni omude kunayo yonke futhi wesitimela ibhuloho e-Europe, emangalisa Oresund ibhuloho.
New futhi vintage kwelinye - izitimela esheshayo eYurophu ukunikela ukuthi kungenzeka. Khetha isitimela ohlwini ngenhla futhi siyaqiniseka ukuthi nawe uzokujabulela isipiliyoni uthola.
Ongawabhuka izitimela amathikithi wakho phakathi izitimela Esheshayo eYurophu ku Londoloza-A-zemininingwane Cishe zonke lapho uya khona wacela ngenhla 3 amaminithi, ngesikhathi eshibhe ezitimela amazinga futhi ethathelwa izimali yokubhuka obnoxious!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhich-are-the-fastest-trains-in-europe-and-the-world%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#izitimela #sphamandla amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi